बारम्बार संयमता नगुमाउ बर्षा « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
जिवन पराजुली। जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ तब संसारभर रहेका नेपालीहरुको एउटै आवाज हुने गर्छ । नेपालको राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली जनता कसैले पनि कुनै पनि दिन सम्झौता गरेका छैनन् । अहिले पनि देशलाई दुखेको छ । असल मित्र बन्न खोज्ने छिमेकी देश भारतले कालापानी-लिम्पियाधुरा-लिपुलेखमा रहेको नेपालको भुमि मिचेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न भौतिक विकास गरिरहेको छ ।
भारतले आफ्नो देशका नागरिक तिब्बतको धार्मिकस्थल मानसरोवर जानको लागी अति नै महत्वपूर्ण मानेको तथा चीनसँगको व्यापारको सजिलो नाकाको रुपमा विकास गर्न खोजेको लिपुलेख नेपालको हो तर केहि समय अगाडी भारतले मनोमानी रुपमा एकतर्फी आफ्नो देशो नक्सा सार्वजनिक गरी भारतमा नै रहेको दावी गर्यो । उसले दावी मात्र गरेन अहिले सडक नै नेपाली भूमिमाथी बनायो । यहि बीचमा नेपालले उक्त भूभाग सहितको जमिन आफ्नो रहेको भन्दै लिम्पियाधुर-लिपुलेख-कालापानी सहितको नक्सा जारी गरेको छ । नक्सा जारी गरेपछि निद हराम भएका भारतीय मिडियाले एक-दुई दिन कोकोहोलो गर्न नयाँ बिषय पाए । नक्सा जारी भएपछि भारतीय चलचित्रबाट नाम कमाएकी अभिनेत्री मनिषा कोईरालाले नेपालको समर्थन गर्दै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ट्वीट शेयर गरिन् जसबाट भारतमा अर्को हलचल पैदा भयो । फेरी भारतिय मिडियाले मनिषाको खेदो खन्न थाले । उनलाई चीनसँग जोडेर समेत हेरियो, कारण थियो तीन देशहरु चीन, नेपाल र भारतले वार्ता गर्नुपर्ने भनाई । मनिषालाई ‘भारतको खाने, चीनको गीत गाउने’ समेत भनियो ।
यहि बीचमा लकडाउनमा घरमै बसेका नेपाली नायिकाहरु बर्षा राउत र प्रियंका कार्कीको एक अनलाइन अन्तरवार्ता मिडियाको भिडियो च्यानलमा प्रशारण भयो । उक्त अन्तरवार्तामा प्रियंकाले देशको सिमाना मिचिएको बारे आफुले अध्ययन गरिरहेको बताएकी छन् तर बर्षाले भने राष्ट्रियताको बिषयमा संवेदना गुमाउन पुगिन् । उनले सीमा विवादले भारतका साथीहरुसँग ‘फेस’ गर्न गाह्रो भएको बताईन् । त्यो भनाई सम्पादन बीना नै मिडियामा प्रशारण भयो । जब दर्शकले उनको भनाई सुने तब उनिमाथी प्रहार शुरु भयो । ‘बर्षा लैजा लिम्पियाधुरा ले’ जस्ता प्रतिक्रिया हुँदै बर्षा भारतकै भएको समेत टीप्पणी उनकै दर्शकले गरे ।
दर्शकका टीप्पणीबाट एकाएक तनावमा फसेकी उनले एउटा लामो माफीनामा लेखिन् र त्यसलाई सामाजिक संजालहरुमा पोस्ट गरिन् । कतिले माफीलाई ठिकै भने, कतिले नाटक मात्र भने । राष्ट्रियताको प्रसंगमा संवेदनहिन भएपछि एउता माफीले मात्र दर्शकले मान्ने कुरै थिएन । उनको माफीलाई वास्ता नगरी उनिमाथी लागातार प्रहार भईनैरह्यो । सोही बीचमा उनको एक भिडियो अन्तरवार्ता सार्वजनिक भयो, जहाँ पत्रकार ऋषी धमलाले अन्तरवार्ता लिएका छन् ।
उक्त अन्तरवार्तामा पुन: बर्षाले उस्तै प्रकृतीको गल्ती दोहोर्याइन । उनले विदेशमा रहने नेपालीहरुको गज्जबले चित्त दुखाइन् । अन्तरवार्तामा उनले भनेकी छन्, ‘यदि मलाई देशको माया हुने थिएन भने म विदेशमा गएर काम गर्थेँ, नेपालमा हुने थिइन’ । उनको भनाईले विदेशमा रहेर विभिन्न पेशा व्यावसाय गर्ने नेपालीहरुको चित्त दुख्यो । यसप्रती चित्त दुखाउँदै अमेरिकामा रहेका कलाकारहरु, निर्देशकहरु, पत्रकारहरु तथा सर्वसाधारणले टीप्पणी गरे ।
केहि बर्षदेखी अमेरिका बस्दै आएका पत्रकार सुमन गैरेले लेखे, ‘एक जना अभिनेत्रीका अनुसार आफ्नो नेपाल आमालाई माया गर्न नेपालमै बस्नु पर्छ रे ! उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘म देशलाई माया गर्छु त्यसैले म विदेशको पिआर लिएको छैन’ । तपाईंको देश प्रतिको कर्तव्य र योगदान हेर्ने हो भने विदेशमा रहने नेपालीको भन्दा न्यून छ । म जस्तै प्रवासमा रहने नेपालीहरूलाई देशप्रतिको कर्तव्य, सम्मान र प्रेम देखाउन कसैको अनुमति चाहिन्छ र ? देशमा जुनसुकै विपत्ती आइपर्दा विदेशमा बस्ने नेपालीहरू नै एक भएर अगाडि बढेका उदाहरण धेरै छन् । कृपया ! खोक्रो राष्ट्रवाद नदेखाउनुस् । जय देश ! जय नेपाल !’ । उनको यो टीप्पणी एउटा उदाहरण मात्र हो ।
मनिषाले पनि काम त भारतमै गरेकी हुन् । नेपालका लाखौँ जनताहरु विदेशमा काम गर्छन्\_बस्छन् तर कुनै पनि नेपालीले राष्ट्रियताको मामलामा आफुलाई कमजोर बनाएका छैनन् । मनिषाले कर्म भारतमा गरेतापनि उनको मातृभुमी नेपाल हो, त्यसैले उनले नेपाल र नेपालीको हितमा मात्र बोलिन् । मातृभुमीको रक्षा नै उनले आफ्नो प्रमूख कर्तव्य ठानिन् । राष्ट्रियताको अगाडी फ्यानको माया फिक्का नै हुन्छ । राष्ट्रभक्त कलाकारले त्यो बुझ्नु जरुरी छ ।
बर्षाले नेपालको पत्रकारहरु माथी पनि अन्तरवार्तामा प्रसंग निकालेकी छन् । एकअर्कामा फुट ल्याउन हात रहन्छ भनेकी छन्, यहि सीमा विवादको बिषयमा नेपाली जनतालाई नराम्रो छाप पारेका छन् भनेकी छन्, तर नेपाली संचारमाध्यमहरुले कहिल्यै पनि नेपालको राष्ट्रियतामा खलल पुग्ने तथा एक अर्कामा नियोजित फुट ल्याउने काम गरेका छैनन् । बरु राष्ट्रियता जोगाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम गरेका छन् ।
त्यसैले, एउटा विवाद पछि त्यसबाट जोगिन अर्को गल्ती नगर बर्षा ! राष्ट्रियताको सन्दर्भमा बारम्बार संयमता नगुमाउ बर्षा !